Dhammaan ku saabsan daabacaadda 3D - Hardware bilaash ah | qalab bilaash ah
Wax-soo-saarka wax-soo-saarka wax-soo-saarka wax-soo-saarka wuxuu leeyahay qaybo badan oo codsi ah, labadaba qaybta firaaqada iyo warshadaha iyo farsamada. The Daabacaadda 3D waa hadda, mustaqbalkeeduna wuxuu u muuqdaa mid sii ifaya si loo xalliyo mashaakilaadka ilaa hadda aan lagu samayn karin hababka kale ee wax soo saarka caadiga ah. Intaa waxaa dheer, waa daahfurka dhabta ah ee kuwa jecel DIY iyo kuwa sameeya, markaa waa inaad wax walba ka ogaataa iyaga.
Hagahan waxaad wax ka baran kartaa kan ugu fudud ilaa kan ugu adag. Sida unugga voxel, iyada oo loo marayo sababta ay u tahay daabacaha 3D iyo sida ay u shaqeyso, xoogaa taariikhdeeda ah, tillaabooyinka naqshadeynta moodooyinka ilaa moodelka la daabaco, iyada oo la marayo software lagama maarmaanka ah, marxaladaha wax soo saarka wax lagu daro, iyo codsiyada suurtagalka ah (warshad, waxbarasho, madadaalo, farshaxan, daawo,...).
STL iyo qaabab kale oo faylal ah
Macluumaadka qaabka STL iyo noocyada kale ee qaababka loogu talagalay moodooyinka daabacaadda, iyo sidoo kale beddelka suurtagalka ah, iyo software lagama maarmaanka ah.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato sifooyinka mid kasta oo ka mid ah noocyada daabacadaha 3D jira: tignoolajiyada, faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka mid kasta, labadaba kuwa loo isticmaalo gudaha iyo kuwa isticmaalka xirfadleyda iyo warshadaha, bioprinters, qalin 3D, iwm.
Sida loo doorto daabacaha 3D
Markaad u baahato inaad doorato koox cusub shakiyo badan ayaa soo baxaya, oo hagahan ku saabsan sida loo doorto daabacaha 3d waad iska saari kartaa shakigaaga. Waxaad baran doontaa waxa ay tahay inaad tixgeliso si aad u sameyso doorasho wanaagsan sida waafaqsan baahidaada, sifooyinka farsamada ee ugu muhiimsan ee fiilada, xabagta, iyo daabacadaha 3D warshadaha, adeegyada daabacaadda 3D ee kale, qiimaha, sida loo rakibo daabacaha iyo tallaabooyinka ugu horreeya si loo bilaabo daabacaadda.
Waa maxay daabacaha 3D jaban ee la iibsan karo
Talooyin qaar ka mid ah noocyada iyo moodooyinka daabacayaasha 3D ee ugu jaban Maxaad iibsan kartaa
Waa kuwee daabacaha 3D ee guriga lagu iibsado
Haddii aad raadinayso shay guriga leh oo leh astaamo wanaagsan, laakiin aan qaali ahayn, halkan tag talooyinka ugu fiican ee daabacayaasha 3D ee sameeyayaasha iyo hiwaayadaha
Qaar ka mid ah noocyada daabacadaha 3D ee ugu fiican iyo moodooyinka si aadan u qaldamin doorashada, kuwa fiilooyinka ku jira kuma filna.
Waa kuwee printer 3D warshadaha si ay u iibsadaan
Haddii aad doonayso inaad si xirfadaysan ugu isticmaasho isgaadhsiinta ama haddii aad leedahay shirkad iyo waxaad u baahan tahay daabacaha 3D warshadaha, halkan waxaa ah qaar ka mid ah kuwa ugu fiican.
Filaments daabacayaasha 3D iyo resins
Sida madbacadaha caadiga ah waxaad u baahan tahay inaad iibsato kartoonada khad iyo toners, daabacadaha 3D waxaad u baahan doontaa nooc kale oo waxyaabaha la isticmaalo, sida fiilooyinka iyo resins. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka alaabooyinkan iyo dhammaan agabyada aad ku daabacan karto.
Qaybaha kaydka ah ee daabacayaasha 3D + hagaha dayactirka iyo dayactirka
Soo hel dhammaan qaybaha aad u baahan tahay daabacahaaga 3D: taageerooyinka, sariiraha, xaashida PEI, koollada kulaylka, extruders, nozzles, tuubooyinka PTFE, matoorada jaranjarada, sahayda korantada, suumanka waqtiga, jiidashada, xadhkaha, kulayliyaha, qaboojinta, saliidaha, nalalka, taangiyada resin, iyo in ka badan. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad barato sida loo ilaaliyo daabacaadda 3D (calibration, nadiifinta, ...) iyo dhammaan dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo xalalkooda.
Waa kuwan qaar ka mid ah scanners 3d ugu fiican in aad ka heli karto mashaariicdaada xirfadlaha ah ama wakhtiga firaaqada ah, si aad u dhoofin karto muuqaal kasta ama shay kasta qaab 3D dhijitaalka ah si aad ugu daabacdo daabacaada 3D, dib u taabto, iwm. Waxa kale oo aad awoodi doontaa in aad barato sifooyinka qalabkan, noocyada, sida loo doorto midka kuugu habboon, iwm.
ka Daabacayaasha 3D wuxuu ku dhex leeyahay bulshada dhexdeeda shaki kuma jiro in Daabacaadda 3D ayaa kor u kacaya. Qaybtan iyo maqaalladayada waxaannu kuugu soo bandhigi doonnaa warar xiiso leh oo ku saabsan noocan ah daabacayaasha iyo daabacaadda, tusaale ahaan si loo go'aansado aaladda aad iibsanayso ama aad ku baranayso sida loo isticmaalo. Haddii aad u baahan tahay macluumaad ku saabsan daabacaadda 3DSamee naftaada mid raaxo leh maxaa yeelay waxaad gaartey goobta ugu fiican shabakada si aad uhesho sidoo kalena aad barato boqolaal shey.
by Isaac samee Bilaha 3 .
Haddii aad raadinayso daabacaha resin 3D wanaagsan, hagahan waxaad ku arki doontaa qaar ka mid ah noocyada iyo noocyada lagu taliyay iyo…
Intaa waxaa dheer in aad awood u leedahay in aad naftaada naqshadeyso joomatari gabalka aad rabto in aad ku daabacdo daabacahaaga 3D adiga oo isticmaalaya software,...
Daabacadaha 3D waxay leeyihiin dhibaatooyin iyo burbur sida qalab kasta oo kale, marka waa inaad taqaanaa sida loo sameeyo dayactir habboon.
Toners iyo kartoonada khadku waa agabka madbacadaha 2D, si kastaba ha ahaatee, daabacayaasha 3D waxay u baahan yihiin…
Wax-soo-saarka wax-soo-saarka wax-soo-saarka wuxuu noqday mid ka mid ah kheyraadka ugu rajo-gelinta badan qaybta warshadaha. Noocan ah wax soo saarka...
Waa maxay daabacaha 3D si aad u iibsato guriga
Waxaan horey u soo bandhignay talooyin ku saabsan daabacayaasha jaban, laakiin… ka waran haddii aad raadineyso wax ka fiican? Hagaag markaa, maqaalkan kale…
Octoprint: meel fog ka maamul daabacahaaga 3D
by Isaac samee Bilaha 4 .
Haddii aad jeceshahay daabacaadda 3D, hubaal waxaad jeclaan doontaa inaad wax badan ka ogaato mashruuca Octoprint. Software code...
Waxaa jira noocyo badan iyo noocyo badan oo daabacado 3D ah oo jaban, sidaa darteed aad ayay u adagtahay in la doorto...
Hagaha kama dambaysta ah: Sida loo doorto daabacaha 3D
Marka shakigu kugu soo weeraro markaad wax iibsanayso, ma jiraan wax ka fiican inaad ogaato sifooyinka ugu muhiimsan iyo…
Faylasha STL: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qaabkan iyo beddelkiisa
Haddii aad soo gashay adduunka daabacaadda 3D, hubaal waxaad ku aragtay in ka badan hal meel…
Maqaalkii hore waxaan ku samaynay nooc ka mid ah hordhaca adduunka ee daabacayaasha 3D. Hadda waxaa la gaaray...
Tresdpro R1, oo ah daabacad xirfadle ah oo asal ahaan Isbaanish ah
Waxaan falanqeynaa PLA 3D850 iyo 3D870 oo ka socda soo saaraha Isbaanishka Sakata3D
Waxaan falanqeyneynaa fiilooyinka qalaad ee qalabka Smart 3D
Sida loo sameeyo printer-kaaga 3D-ga ah mid aad u dhaqso badan adoon waayin tayada daabacaadda
Waxaan ku falanqeynay PLA CARBON FFFWORLD, fiilo 10 ah
Prusa i3 MK3, oo ah madbacadda cusub ee Josef Prusa
Waxay abuuraan iskaan weyn 3D mahad Raspberry Pi
Labiskaaga Raspberry Pi labiska kiisaska asalka ah
Qlone, codsi gabi ahaanba bilaash ah oo 3D ah
Falanqaynta sawir-qaadaha ee 'XYZPrinting 3D scanner'
Kulan iyo Falanqeyn ku saabsan daabacaadda 3D ee KIT BQ Hephestos
Wanhao Nuqulliye 3 7D Falanqeeye Daabacaad
Fidget Spinner, tooy aan dhisi karno
Waxaan falanqeyneynaa FFFworld filaments: Debecsan, PETG, ABS, Birta iyo PLA
Falanqaynta 3D daabacaadda Legio oo ka socota soosaaraha Isbaanishka Leon 3D
Samee mashiinka ciyaarta arcade adoo u mahadcelinaya daabacaadda 3D
Falanqeyn dhameystiran iyo tijaabinta daabacaadda BQ Witbox 3 2D
Waxay abuuraan daabacaad 3D ah oo leh qaxwada duug ah iyo guddiga Arduino
Qalabkan loo yaqaan 'Leon3D' waxaad ugu rogi kartaa daabacahaaga 3D xardho iyo xardha